Uyilo lokugqibela lweZTE Axon 9 Pro sele lubonakalisiwe I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba i-ZTE izakuba kwi-IFA 2018. Uphawu lwesiTshayina luza kubonisa ifowuni yalo entsha, iAxon 9 kumsitho owawuseBerlin. Nangona le modeli ingeyiyo yodwa esiyifumana kolu luhlu, kuba imodeli entsha ibhengeziwe. Le yiAxon 9 Pro, nekulindeleke ukuba iboniswe ekupheleni kwale nyanga ka-Agasti.
Imodeli entsha, esele iqalile ukubhalisa kwiinyanga ezidlulileyo. Ngoku, sele sinayo phakathi kwethu uyilo lokugqibela lwale ZTE Axon 9 Pro. Siyabulela kule mifanekiso sinokubona ukuba le modeli isilungiselele ntoni.
Siyabona ukuba uphawu lukhethile kwifowuni ngenotshi, njengoko kuqhelekile kwiimveliso zaseTshayina. Simi ngaphambili inotshi enkulu, elawula ngokuphawulekayo isikrini Kwisixhobo. Uyilo oluphefumlelweyo kwinxalenye ye-iPhone X.
Ngasemva kwale ZTE Axon 9 Pro sifumana ikhamera ephindwe kabini, ebekwe nkqo. Ngaphantsi kweekhamera sifumana ukukhanya kwe-LED. Ukongeza, isixhobo sokubamba iminwe yesixhobo sokulinda ngeminwe sikwalindele ngasemva. Ngokwesiqhelo uyilo esilubona kakhulu kwintengiso.
Ngokumalunga neenkcukacha, akukho nto iyaziwayo okwangoku ngesi sixhobo. Sele iinyanga inkampani ibhalisile le ZTE Axon 9 Pro, kodwa okwangoku akukho zinkcukacha zifikiweyo ngayo. Ke kubonakala ngathi kuyakufuneka silinde kude kube yinkcazo-ntetho yethu ukuba sinedatha.
Icandelo elililo kukuba akufuneki ulinde ixesha elide kude kufike le ZTE Axon 9 Pro, njengoko kulindelwe iya kwenziwa kamva kule nyanga. Ke kwiveki ezayo kufanele ukuba ibe semthethweni ngoku. Silindele isiqinisekiso esivela kwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » Uyilo lokugqibela lwe-ZTE Axon 9 Pro lutyhiliwe